सेयर बजारमा किन आफ्नो सेयर आफैंलाई बिक्री गरिन्छ ? « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
सेयर बजारमा किन आफ्नो सेयर आफैंलाई बिक्री गरिन्छ ?
हरिशरण न्यौपाने । तपाईले वाससेल भन्ने सुन्नुभएको छ । सुन्नुभएको छ वा छैन । यदि सुन्नुभएको छैन भने पनि ध्यान दिनुहोस् । वाससेलले आफूसँग भएको सेयर आफ्नो परिवार, नातेदार वा साथीभाईको नाममा बिक्री गर्छ ।
यसो भनिरहँदा यो कुनै बिक्री पनि होईन । तर यो कारोबार भनेको आफुसँग भएको सेयर आफैंलाई बिक्री गर्नु बराबरको कारोबार हो । अब बुझ्नुस्, वाससेलमा कुनैपनि लगानीकर्ताले एकै दिनमा एउटै कम्पनीको सेयर एकै मूल्यमा वा फरक मूल्यमा बराबर संख्यामा किनबेच गर्ने गर्दछ ।
तपाईलाई खुल्दुली लाग्नसक्छ, किनहोला लगानीकर्ताले एकै दिनमा एउटै कम्पनीको सेयर एकै मूल्यमा वा फरक मूल्यमा बराबर संख्यामा किनबेच गरेको भनेर ? फेरी पनि बुझ्नुस्, यसरी किनबेच गर्नुको उदेश्य कम्पनीको सेयरको ब्यापक कारोबार भएको अर्थात् मूल्य घटबढ भएको देखाउनु हो ।
यतिमात्रै होईन यसो गर्नुको अर्को उदेश्य पनि छ । त्यो भनेको कम मूल्यमा कारोबार गराई घाटा देखाउनु र उक्त घाटालाई नाफामा घटाई कर छुटको फाईदा लिनु पनि हो । यतिले मात्रै यसको उदेश्य पुरा भएको छैन । यस्तै अर्को उदेश्य पनि छ त्यो हो, कम मूल्यमा आफ्नो सेयर आफैंलाई बिक्री गरी बजारमा मूल्य घटेको देखाउने र सस्तो मूल्यमा थप सेयर खरिद गर्नु हो ।
तपाईलाई लाग्न सक्छ के नेपालमा यस्ता गतिबिधी हुन्छन् होला त ? जो गैर क्रियाकलापमा सक्रिय छन्, उनीहरुबाट यस्ता गतिबिधीको कमी छैन । त्यसैले सेयर बजारमा तपाई हरदम सचेत बन्नु जरुरी छ ।
प्रकाशित मितिः २०७४ बैशाख २९
सबै जिल्लालाई राजधानीसंग जोड्न यसरी बनाउँ प्रादेशिक सडक
विद्रोही गिरी प्रदेश नं. ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पहिलो निर्णय सबै स्थानीय तहबाट प्रदेश
नारी दिवसकै दिन नारीमाथिको ‘क्रूर’ आक्रमण सामाजिक विकृति कि चुनौती ?
भर्खरै मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस विभिन्न कार्यक्रमका साथ धुमधामले मनाइयो । महिला हक–हित र अधिकारको
एमाले केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्प कंडेलको नजरमा ‘ओली सरकारका चुनौती’
नारा नै चुनौती केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकार चुनौती नै चुनौतीको पहाडमा उभिएको छ ।